Uru - Conssin Lighting Co., Ltd.
ÌH L ỌZỌ No.6 Tie Ling Industrial Centralized Mpaghara, Minhou Fuzhou 350100 China
Oge ọfịs anyị
Mọnde - Fraị 08:00 am - 17:00 pm (GMT +8)
Anyị na -aza ajụjụ niile dị n'ime
Ọkụ Conssin bụ onye nrụpụta na onye na -eweta ọkụ ọkụ LED, ọkachamara na ọrụ ọkụ ọkụ nke ndị ahịa na azụmaahịa.
Ngalaba na -enye ọkụ ọkụ
Ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ
Ikanam na Ọdịdị Metal Halides
Consin Lighting agala 20th GPO ...
Anyị bụ ụlọ ọrụ lekwasịrị anya na ịchekwa ume site na ịme ihe kacha mma
ọkụ eletrik na ụwa. Ebumnuche anyị bụ imepụta ọkụ ọkụ kacha mma nke karịrị atụmanya.
Ahụmịhe ndị ahịa
Ìhè Mpaghara Egwuregwu
Ọkụ ndị ọrụ
Panoramic 360 Celsius
ỌRỤ ọrụ A
ỌRỤ ọrụ B
ỌRỤ ọrụ C
Ọkụ Mpaghara Ọha
Uru & Njirimara Ngwa
1. Ihe kacha mma
A na -achịkọta ngwaahịa ọkọlọtọ anyị na klaasị nke mgbawa LED, ọkwọ ụgbọ ala, ọnụ kọntaktị, eriri eletriki na ihe nchebe n'ahịa. Aluminom dị elu na -eme ka ọkụ anyị bụrụ ihe siri ike, mana ọ dị fechaa.
2. Nhazi usoro
Emebere ọkụ ọkụ Conssin's LED maka ụlọ elu ọkụ, ha pere mpe, pere mpe, na -adịte aka. Nhazi anyị na-ebelata mpaghara ihu n'ihu iji belata ihe ize ndụ nchekwa mgbe etinyere ọkụ.
3. Nkesa Ìhè
Anyị na-eji nkesa asymmetrical iji hụ na ịdị n'otu kacha mma, enyo enyo enyobere maka oghere ọkụ SMD LED na-enwekwu omume enyi n'anya mmadụ na saịtị. Anya anyị 'na -ahazi nke ọma ma na -enye anyị ohere izute mkpa ndị ahịa.
4. Nchekwa IP69K IP.
Ekwesịrị ịkwadebe ụlọ elu ọkụ mkpanaka maka ọnọdụ ọjọọ. Ihe nrụnye ọkụ LED anyị nwere arụmọrụ mmiri na-enweghị atụ ma nwee ike iguzogide mgbali elu na ikuku ikuku dị elu maka nhicha. Ntụle Nchedo IP: IPX5 ~ IPX6 (mmiri ozuzo) ， IPX7 ~ IPX8 (mikpuru n'ime mmiri) ， IPX9 (nha nha 80 pressure mmiri na omimi nke mita 1000)
5. A nwalere ịma jijiji
A na -adọkpụkarị ụlọ elu ọkụ mkpanaka maka njem, ọ bụ ya mere ịdịte aka ha ji dị oke mkpa. A haziri ma rụọ ọkụ ọkụ LED anyị maka ngwa dị oke mkpa. Ihe ndozi siri ike bụ site na nnwale ịma jijiji siri ike na nnwale ike. Ntụle mmetụta bụ IK10 maka ọkụ dabara adaba na oghere PC, IK08 maka oghere enyo.
6. Idozi njikwa & Gear Patent
Aka na -akwụsi ike na nke a pụrụ ịdabere na ya nke nwere gia na -eme ka usoro nrụgharị ọkụ dị mfe. Naanị nzọụkwụ 3, enwere ike idozi ọkụ ọkụ. Naanị ịtọghe, tụgharịa, ma kechie.
7. Asambodo mba ụwa
ISO 9001: Asambodo Sistemụ Njikwa Ogo 2015 maka ahịa dị iche iche CE, CB, ENEC maka European Market CSA maka North American Market SAA maka Ahịa Australia PSE maka Ahịa Japan Na mgbakwunye, anyị enwetala nkwado CE na CB site na DEKRA, Germany; na ENEC sitere na KEMA.
8. Nkwenye ndị na -azụ mba ofesi
Ìhè Conssin na -enye ụfọdụ ọkụ ọkụ LED pụrụ iche maka Mwube & Ngwuputa nye ụfọdụ ụlọ ọrụ ama ama na -ewu ọkụ na ekwentị.
Ihe anyị na -elekwasị anya bụ ime ihe gbasara nsogbu ike ụwa niile. Ego malite ụbọchị mbụ, ozugbo ị kpọtụrụ Conssin Lighting. Kpọọ ugbu a!
No.6 Tie Ling Industrial Centralized Mpaghara, Minhou Fuzhou 350100 China
Ngwaahịa kacha ere
Ezubere maka gburugburu siri ike.
Maka ojiji na ụlọ nkwakọba ihe na mpaghara nnukwu ikike.
Ngwa mpaghara ọha
Ngwa ngwaahịa ọkụ mpaghara.
Ikanam Scene Light, Nnukwu ọkụ ọkụ Bay Bay, Mkpuchi Ụlọikpe Egwuregwu N'èzí, Ọkụ na -enwu ọkụ, Mere Solar Abù Ìhè, Nnukwu ọkụ na -edu ọkụ,